Mintigo: isa azo isaina ho an'ny orinasa | Martech Zone
Amin'ny maha mpivarotra B2B antsika dia fantatsika rehetra fa ny fananana rafitra scoring fironana hamantarana ireo mpitarika vonona ny varotra na ireo mpividy mety ho zava-dehibe amin'ny fampandehanana ireo programa fitakiana fitadiavana fahombiazana sy ny fitazonana ny fampifanarahana amin'ny varotra sy ny varotra. Fa ny fampiharana ny rafitra firaketana isa izay tena miasa dia mora lazaina kokoa noho ny vita. miaraka Mintigo, azonao atao izao ny manana maodely scoring lead izay mampiasa ny herin'ny vinavina Analytics ary angona lehibe hanampy anao hahita ny mpividy haingana kokoa. Tsy maminavina intsony.
Mintigo dia mpamily fomba fiasa vaovao amin'ny ezaka ataontsika ankehitriny. Heather Adams, Manager marketing ao amin'ny netFactor
Mintigo Predictive Lead Scoring dia ahafahan'ny mpivarotra orinasa manampy ny tanjaky ny varotra mialoha amin'ny isa nataonao.
Ahoana ny fomba fiasan'ny scédit Mintigo Predictive
Mintigo manomboka amin'ny zavatra fantatrao, fampiasana ny data CRM sy marketing automation anao.
Mety misy zavatra fantatrao momba ny fitarihanao: Iza amin'ireo fampielezan-kevitra hitan'izy ireo, ny toerana nikitihin'izy ireo ary inona no nofenoiny tamin'ny takelakao. Ampiasainay ity angon-drakitra sarobidy ity hanombohana manangana ny maodely vinaninao
Mintigo manampy izay fantatr'izy ireo, manampy tondro marketing amin'ny Internet an'arivony. Mintigo dia manangona sy manavao tsy tapaka ny teboka data an'arivony amin'ny orinasa an-tapitrisany. Ity fampahalalana ity dia misy fampahalalana ampahibemaso momba ny vola, ny mpiasa, ny fandraisana mpiasa, ny teknolojia, ny marketing ary ny varotra ary koa ny fandinihana semantisan'ny dian-dizitaly an'ny orinasa. Ny valiny - ny mombamomba ny diplaoma 360-diplaoma isaky ny firaketana ao amin'ny base data.
Mintigo mampihatra mialoha Analytics, manangona angon-drakitra goavambe miaraka amin'ny fianarana milina hanapotehana ny CustomerDNA ™. Mintigo dia mandray ny angon-drakitrao, ny angon-drakitra manokana misy anao ary ny sanda ambony indrindra mitarika anao ary mampiasa ny fianarana milina hitadiavana ny CustomerDNA ™ anao, ireo setin'ny tondro izay mampiavaka azy ireo raha ampitahaina amin'ireo torolàlana hafa rehetra ao amin'ny data-nao. Ny valiny dia andiana tondro sy maodely isa izay afaka maminavina ny mety hiova.
Mintigo isao ny tahiry fitehirizan-kevitrao, mamantatra ireo fitarika sarobidy indrindra aminao. Mintigo dia mampiasa ny maodelim-pahaizana momba ny isa tsy manam-paharoa hamoahana ny fitarihanao efa misy sy ny firaka rehetra miditra amin'ny fantsom-pisianao ao amin'ny rafitra Marketing sy Sales toy ny Eloqua, Marketo ary Salesforce.com. Misy fiatraikany mivantana amin'ny fidiram-bolanao izany - Fantatrao ankehitriny izay mitarika handefasana mivantana any amin'ny Sales sy izay tokony hotehirizinao.
Mintigo dia mampifandray am-pitoerana amin'ny rahona Oracle Marketing
Mintigo manampy ny mpivarotra hahita mpividy haingana kokoa amin'ny fampiasana ny vinavina Analytics. Azonao atao ny manome laharam-pahamehana ny firosoana amin'ny volavolan-dàlana marobe ary mamorona fanentanana manokana miaraka amin'ny tsindry feno tanana.
Alao an-tsaina hoe vao nahavita namolavola ny famolavolana endrika ny pejinao sy ny pejy fitobiana ianao. Ny zava-drehetra dia toa tsara amin'ny fanombohana tranokala vaovao ary faly ny ekipanao marketing. Amin'ireo fampielezankevitra noforoninao, hamorona fitarihana ao anatin'ny fotoana fohy ianao. Eloqua dia manao an'ity dingana ity ho tsotra. Inona ary no manaraka?
￼￼Mintigo dia namolavola fampidirana tokana amin'ny alàlan'ny vaovao Eloqua Sehatra Oracle Marketing AppCloud, mitondra ny Predictive Marketing ao amin'ny Eloqua voalohany amin'ny alàlan'ny famelana anao handray fanapahan-kevitra avy hatrany.
Mintigo dia mampiasa ny herin'ny angona lehibe sy ny vinavina Analytics mba hampisondrotra ny varotrao. Mintigo dia ahafahanao manangana maodely isa ho an'ny tsirairay amin'ny tsenan'nygettarget anao. Ho an'ny maodely vinavina rehetra, Mintigo dia manangona ny angona tantaranao mba hananganana modely matanjaka indrindra.
Miaraka amin'ny isa sy mari-pahaizana mialoha an'i Mintigo dia azonao antoka fa mifantoka amin'ny fifandraisana mety ianao, ahafahanao mahita mpividy haingana kokoa.
Ankehitriny miaraka amin'ny fampidirana vaovao Oracle Marketing AppCloud an'i Mintigo, isaky ny te handray fanapahan-kevitra mialoha ianao dia tariho fotsiny ny sakana Mintigo's Action mankany amin'ny Campaign Canvas. Ampifanaraho fotsiny ny sakana Mintigo's Action mba hamoahana ny fitarika anao manohitra ny maodely mety ary hahazo isa maminany mialoha eo amin'ny Eloqua ianao raha vao manao ny fampielezan-kevitra. Ambonin'izany, Mintigo dia hanosika ireo mariky ny varotra fidinao ao amin'ny Eloqua ihany koa, hahafahanao mampizarazara be pitsiny sy fampahalalana bebe kokoa ho an'ireo solo-barotra.
Mintigo dia ho lasa mpanara-maso ny fifamoivoizana amin'ny rivotra amin'ny automatisation Eloqua marketing anao. Voalohany, azonao atao ny mahazo antoka fa ny fifandraisana ambony isa dia mandray ny fiaran-dalamby ary hahita ny lalan'izy ireo mankany amin'ny ekipanao varotra haingana. Faharoa, azonao atao ny manamboatra ny fampielezan-kevitrao ary mikolokolo ny làlan-kizorana mba hanakoako amin'ny mpihaino anao miorina amin'ny mari-pamantarana marketing an'i Mintigo.
Miaraka amin'i Eloqua sy Mintigo dia azonao antoka fa maka ny fomba fanao tsara indrindra ho an'ny tsirairay amin'ireo mpifanerasera aminao ianao amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny hafatrao sy ny valiny farany.
Tags: isa scm crmeloquaisa firaka orinasaheather adamsLinkedInmarketomintigonetfactorOracleOracle Marketing AppCloudrahona marketing oracleisa voafaritra mialohasalesforcesalesforce.com
Tetika 7 hampitomboana ny varotra fivarotana fialantsasatra
Tapfiliate: Fitantanana Marketing Affiliate mora vidy